[RASMI] About Dr.Fone - Goboka, Jawaabo iyo Hadda
Fuudh fiican, wada.
dr.fone waa mid ugu horeysay adduunka ee la siinayo macruufka ah software kabashada xogta iyo soo kabashada xogta Android, taasoo lagu caawiyay dad badan oo.
Iyada oo 10+ sano oo khibrad ah ee la siinayo dadka software iyo adeegyada top-kaalinta, Wondershare dr.fone ayaa u go'ay si ay ugu adeegaan 50 000 000+ isticmaala. Wondersharers leeyihiin iyo waligey illoobi doonin ballamada iyo sii caawiyaan macaamiisha ku raaxaysan nolosha digital cajiib ah.
Goboka for qamaar arrimaha mobile kala duwan.
jawaabo wax ku ool ah si ay su'aalo mobile kala duwan.
Khubarada in meel fog laga caawiyo arimaha mobile oo dhan.
kooxda dr.fone kulan
Fikradaha waa u fududahay. Hirgelinta waa adag yahay.
Kuwani waa dadka ugu muhiimsan kuwa mile oo dheeraad ah si aad waayo-aragnimo ku saabsan dr.fone mid aan la ilaawi karin!
13+ Wondershare waxaa la aasaasay.
Awards & abaalmarino
ADwards & dib u eegista More
Solution Mobile jecel yahay dunida ee
Si qaadashada xal mobile bixiyaha ugu fiican, dr.fone xajiya indhaha ku dhow baahida dadka isticmaala ', iyada oo loo marayo wax soo saarka-celin, Q mobile & forums A iyo wixii la mid ah. Si aad u taariikhda, dadka adduunka oo dhan ayaa lagu rakibay badan 50.000.000 barnaamijyada dr.fone.
Tan iyo 2003, malaayiin software Wondershare ayaa lagu rakibay.
Thanks Gaarka ah Malaayiin Macaamiisha Nice
dr.fone badbaadiyey aan sawiro iyo xusuusta oo qaali ah, mahad!
Waad ku mahadsan tahay wax badan u soo kabsaday aan photos lumay. photos Kuwani u qoraan oo dhan xasuusta ii qaali ah oo leh gabadhayda. Waxaad tahay mid ka mid ah oo kaliya ka mid ah goobaha fara badan in iga caawin kara sawiro aan lumay on my iPhone 6s. Waxaan kaliya oo aan ku filan oo aad uga mahadcelin karaa !!!
iibiye A ka USA, NY
Thanks to dr.fone, waxaan aad u hesho dib u xiriirada oo dhan aan on my iPhone 6. Sida iibiye, aad u ogaato, xiriirada, kuwaas oo ka dhigan tahay wax badan ii. Aad ayaad u mahadsantahay, dr.fone.
Waxaanu qiimaynaa macaamiisha oo dhan iyo u dhiibayaa si ay u siiyaan adeegga macaamiisha u fiican. Waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay in ay bixiyaan si ay u comments iyo walaac dhegaysanayay. Sida aannu macaamiisha, waxaad tahay tixgelin saraysa nagu leeyihiin.
Media: marketing02 # wondershare.com (xiriirka warbaahinta oo kaliya, bedelo # leh @)
Partner: Selena # wondershare.cn (baaritaan ganacsi oo keliya, bedelo # leh @)
Weydiimaha taageero fadlan booqo HALKAN
Ma doonaysaa ganacsi kicin? Nala soo xariir fursadaha more